Home Wararka Xasan Kheyre oo lacag dheeraad ah ka codsaday Muqadishu
Kusimaha Madaxeynaha Galmudug Xasan Kheyre ayaa lacago dheeraad ah codsaday in loogu diro magalaada Dhuusamareeb. Sida MOL shalay idinkuugu soo tabisay, Xasan Kheyre ayaa qaraashaad badan ku bixiyo joogitaanka uu joogo magaalada Dhuusamareeb. Maanta ayaa la filaayaa in Dhuusamareeb loogu geeyo lagu sheegay in ay $800,000 oo lagu soo qaadi doono diyaarad qaasa.
Kheyre oo garan la’a sida uu mar uun uga dhex bixi lahaa fashilka uu lugaha kula jira ayaa waxa uu bilabayaa maanta uu lacago ku iibsado odoyaasha dhaqanka ee Xeraale iyo kuwa Cabudwaaq. Sidoo kale waxa uu codsaday in odoyaasha Saleemaan lacag u soo doontaan Dhuusamareeb ama uu isaga tag halkaas.
Shirkii been abuurka ahaa ee Dib u Heshiisiinta ayaa uu doonayaa on uu halkaas ka furo isaga oo isctimaalaya lacagihii laga soo aruuriyay shacabka ku dhaqan magaalada Muqadishu.
Previous articleQaban qaabada doorashada Jubbaland oo si xoowli ah ku socoto & B. Caalamka oo soo dhawaysay
Next articleDowladda Farmaajo oo taageertay xasuuqa Shiinaha ku hayo dadka Muslimiinta ah (Caddeyn)
Taliska Booliiska magalada Jowhar oo amarro dul dhigay qaar ka mid ah beeraleyda iyo...
Taliska Ciidamada Booliiska ee magaalada Jowhar ayaa amarro dul dhigay qaar ka mid ah dadka beeraleyda ah ee Hirshabeelle. Taliyaha saldhigga ciidamada Booliiska ee degmada...
Ha,yada Amnesty International oo dalbatay in si shuruud la’aan ah lagu...